Amalahle amalahle, iGrill Grill, Umenzi weGrill yoMvelisi | Ukuphila kakuhle
Isibonelelo sethu segrill charcoal, iigrill grills, i-grills zombane ezifanelekileyo.
Ukubonelela ngesisombululo siphela
Ujoliso lwe-Wellsure kwisisombululo esipheleleyo sokubonelela endaweni yokuvelisa kuphela esidibanisa uyilo, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yokumisa.
I-Charcoal Grill yethu, iGrill Grills, iiMveliso zeGrill Grills
Yintoni evuyisa abaThengi bethu.
I-WST-019 yeoyile yepitsa
I-WST-019 yeoyile yepitsa. Imveliso ikumgangatho ophezulu kwaye inentsebenzo ethembekileyo kumaxabiso okhuphiswano.
WST-005. Ukuqinisekisa umgangatho, abathengisi bayo bempahla ekrwada bavavanywe ngokungqongqo kwaye kuphela ngabo baboneleli abahlangabezana nemigangatho yamanye amazwe abakhethwe njengamaqabane exesha elide.
I-Wst-021 yokutshisa i-oveni yegesi / ikhitshi langaphandle lokuhlaziya
I-Wst-021 yokutshisa i-oveni yegesi / ikhitshi langaphandle lokuhlaziya. Le mveliso iyathengiswa kumazwe amaninzi nakwisithili.
I-grill eyakhelwe-ngaphakathi HS-20200811 / Wst-021 i-oveni yegesi
I-grill eyakhelwe-ngaphakathi HS-20200811 / Wst-021 i-oveni yegesi. Imveliso inomgangatho ophezulu wokuthunga. Iteyiphu yokulinganisa iya kusetyenziselwa ukubala ngokulula inani lezititshi nge-intshi ubuncinci iziqwenga ezibini kwisitayile ngasinye ukuze uqiniseke ngokuchanekileyo kokuqina.
Nikeza ngeNkonzo eChongiweyo.
Ukuba awuyifumani imveliso esele ilungile ifanelekile kwiprojekthi, vumela amalahle e-Wellsure, igrill grills, iinkonzo zombane zokwenza iinkonzo zombane zikuncede ufumane imveliso efanelekileyo ngaphakathi kweentsuku ezisi-7 ngaphandle kokuncama ixesha lokuthengisa okanye ukwenza ngokwezifiso.
Ngokusebenza kakuhle kunye namava, sinokubonelela ngokuqhutywa kwe-OEM / i-ODM ngokwembono yabathengi okanye ngokunikezelwa. Siphinde sibe nobuchule bokuphatha kwaye sidlulise i-ISO9001, i-CE, isatifikethi seCSA, ke siqinisekile ukubonelela abathengi bethu ngeemveliso ezilungileyo kunye nezisombululo ezifanelekileyo. Samkela bonke abathengi abavela kwihlabathi liphela.
Ukuba awuyifumani imveliso esele ikulungele ukulungela le projekthi, masibonelele ngenkonzo egcizelelekileyo yokukunceda ufumane imveliso efanelekileyo ngaphakathi kweentsuku ezisi-7.
Umthengi wazise ifom efunekayo, iinkcukacha zomsebenzi, umjikelo wobomi kunye neemfuno zokuthobela.
Iqela loyilo liyabandakanyeka kwasekuqaleni kweprojekthi ukuqinisekisa ukuba imveliso yoyilo elungelelanisiweyo ifaneleke kakhulu kwiimfuno zabathengi.
Ukubonelela ngolwakhiwo oluphezulu, sigcina inkqubo yolawulo olusemgangathweni olusebenzayo.
Nje ukuba iprototype iqinisekiswe ngokwefom, umsebenzi, kunye neemfuno, imveliso linqanaba elilandelayo.
Iimveliso zethu ziphumelele iziQinisekiso ezininzi ngokweMigangatho yoMgangatho kunye neNguquko.
Zhongshan Wellsure Metal Products Co, Ltd zitshintshi
Zhongshan Wellsure Metal Products Co, Ltd zitshintshi yasekwa ngo-2003, sagxila kwiimveliso zealuminium, ifanitshala yangaphandle, igrill grills, igrill zerhasi eyakhelwe-ngaphakathi, iikhitshi zangaphandle, ukutshiza ukujikeleza, isitovu kunye nabenzi bepitsa, iigrill zombane, umngxuma womlilo, ukutshaya, izixhobo ze-kamado kunye ne-BBQ Njl .
Umzi-mveliso we-Wellsure ugubungela ummandla omalunga neemitha zesikwere ezingama-63333. Sinezintlu ezipheleleyo zemveliso ezihambele phambili kunye nezixhobo zovavanyo, kubandakanya indibano yocweyo ngokusika, ukunyathela, ukugoba, ukukhetha, ukuwelda, unyango lomphezulu kunye namandla endibano. Sineqela lobunjineli elinamava ngaphezulu kweminyaka eli-10 yokuhlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo. Sijolise kwisisombululo siphela ekuboneleleni ngokuvelisa kuphela kodwa ngokudibanisa uyilo, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yokumisa.
Ngokusebenza kakuhle kunye namava, singakwazi ukubonelela nge-OEM / i-ODM ngokuqhubekeka ngokweengcamango zabathengi okanye iziketshi. Sikwanolawulo olunobuchule kwaye sidlula kwi-ISO9001, i-CE, isatifikethi seCSA, ke siqinisekile ukuba sinako ukubonelela abathengi bethu ngemveliso elungileyo kunye nezisombululo ezifanelekileyo.
Amalahle ethu egrill, igrill grills, iimveliso zombane zithunyelwa ikakhulu eMelika, eOstreliya, eYurophu nase Mzantsi Afrika. Samkela bonke abathengi abavela kwihlabathi liphela.
Iminyaka eli-17 +
Ngaphezulu kweminyaka eli-17 yeqela leenjineli ezinamava.
Umgangatho onokuthenjwa wokudibana nabathengi bethu.
I-WST-011 yeOvheni engafunekiyo